Sunday July 07, 2019 - 10:05:41 in Wararka by Super Admin
Maxkamadda ku dhaqanka shareecada Islaamka ee wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ayaa markale xukunno ku fulisay rag iyo dumar la shaqeynayay dowladda Federaalka iyo dowladda Kenya.
Fagaare kuyaal degmada Jamaame ee Jubbada Hoose ayaa maanta lagu dilay Afar ruux kuwaas oo qaarkood ay ahaayeen askar u shaqeynayay dowladda Federaalka halka mid kamida uu ahaa ruux muslim ah oo fal Zina ah ku dhacay isagoo guur soo maray.
Dadka ladilay ee ushaqeynayay DF Soomaaliya iyo Kenya.
1-Sulaymaan Max'med Saciid oo 21 sana jir wuxuu katirsanaa ciidamada Booliska dowladda qeybta ka howgala magaalada Muqdisho balse xoogagga Al Shabaab ayaa ku qabtay weerar ka dhacay degmada Afgooye.
2. Yariisoow Baaf Cusmaan (Maye) oo 68 jir sana jir ah wuxuu katirsanaa maamulka degmada Diinsoor ee ciidamada Xabashida Itoobiya ay dhiseen, Ninkan da'da ah ayaa howl muhiim u hayay Itoobiyaanka balse Al Shabaab ayaa howlgal gaar ah ku qabatay.
3-Iqra Cabdi Aadan oo 20 sana jir aheyd waxay u shaqeynaysay Sirdoonka dowladda Kenya waxayna deganeed degmada Mandheera waxay dowladda Kenya uqaabilsaneed la socodka dhaq dhaqaaqa Shabaabka ka howlgala gudaha Kenya.
Dhinaca kale isla fagaaraha weyn ee degmada Jamaame waxaa galabta ka dhacay xukun xukun Rajmi dhagax dil ah oo lagu fuliyay Nin fal Zina ah ku kacay isagoo guur soo maray.
Nuur Bakar Diiroow oo horay guur usoo maray ayaa kufsaday Gabar lagu magacaabo Xaawo Cabdi Muuse oo 16 sana jir ah, Ninkan Zinada galay ayaa dhagax lagula dilay Jamaame.
Waa xukunkii 18-aad oo shan maalmood gudahood ay maxaakimta Islaamiga ah ee Wilaayaatka Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose fuliyaan waxayna xukunnada ugu badan ka dhaceen Jubbooyinka.
Halkan ka dhageyso Qaadiga Maxkamadda oo xukunnadii maanta Akhrinaya MP3